नवलपरासीमा शीर्ष नेताको अस्तित्वको लडाइँ, कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ रिपोट ! — www.mediadabali.com
नवलपरासीमा शीर्ष नेताको अस्तित्वको लडाइँ, कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ रिपोट !
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने नवलपरासीमा पनि निर्वाचनको समय नजिकिँदै जाँदा चुनावी रौनक छाएको छ । प्रदेश नं ४ र प्रदेश नं ५ मा विभाजित नवलपरासीका दुईवटा जिल्लामै उम्मेदवार यतिबेला मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेका छन् ।